Tailengtai တိုင်းလှိုင်တိုင်း: December 2010
ရှင့်ဟာက ကွန်ပျူတာနားမှာ ငုတ်တုပ်တုပ်နဲ့ တစ်ထိုင်ထဲထိုင်ပြီးကြည့်နေ တရားထိုင်ဆိုတော်သေး ညည့်နက်သန်းကောင်ထိ ဆက်ထိုင် မသိတဲ့ ဝက်ဆိုက်ထဲဝင် ရှေ့ပြေးပြီး ခေတ်ဆန်လွန်းလှတဲ့ အင်တာနက်ထဲက ရှင့်ကောင်မလေးတွေ လွန်ကိုလွန်လွန်းတယ်။.....
...အနားမှာ မိန်းမ ရှိမှန်းနှင်ကရုမစိုက်ဘူး နားမလည်တဲ့ ဝက်ဆိုက်ကြီးတွေဖတ် ရှင့်ဝက်ဆိုက်ထဲက စာထဲမှာ လင့်ဝတ်တရား ငါးပါးဆိုတာ မပါဘူးလား?။... ယောက်ျားဆိုတာ ကိုယ်ယူထားတဲ့ မိန်းမကို သူများနဲ့တန်းတူထားနိုင်အောင် ရှာဖွေကျွေးမွေးရမယ်ဆိုတာ သွန်သင်မထားဘူးလား?.....။
အခုတော့ရှင့်ဟာက ဒီအရွယ်ကြီးထိ ကွန်ပျူတာနားက မခွာနိုင်ဘူး ဘိန်းစွဲတဲ့လူနဲ့ ဘာထူးသေးလဲ။......နားမလည်တဲ့ ဝက်ဆိုက်ကြီးတွေလုပ် တောင်တွေးမြောက်တွေး ငိုင်တိငိုင်တိုင်နဲ့.....အလုပ်ပြုတ်ပြီး အလုပ်ရှာမရလို့ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ရတဲ့အထဲ တစ်နေ့တခြား စုတ်ပြတ်ပြီး ဘိန်းစားရုပ်ပေါက်လာပြီ အင်တာနက်ဘိန်းစား........။
.....(မိန်းမရယ် အင်တာနက်ထဲမှာ ငါအလုပ်ရှာတာပါ...။)........တော်ပါတော့ရှင်ရယ်.......
ကျနော်ရထားတဲ့ မိန်းမသည် ရုပ်ချော သဘောကောင်းပေမဲ့ ပစိပစပ်တော်တော်များတယ် ပြောရမည် သူ့စကား ကျနော်နားငြီးမခံနိုင် တစ်ခါတစ်လေ မကြားချင်ယောင်ဆောင်နေလိုက်ရသည်။.....
ဟေ့...ဖေကြီး ကျမပြောတာမကြားဘူးလား?......ရှင့်ဟာက နားမပါဘူးလား?......ကြာတော့ သစ်ငုတ်တိုနဲ့တူလာတယ်။... ကျမဘာပြောပြောအရေးမလုပ်ဘူး.... ဟီးဟီး..ဟီး မိုးချိန်းသံနဲ့ အတူမျက်ရည်မိုးများ ရွာချတော့သည်။..ကျမကိုချစ်လို့ယူထားတာဆို အခုတော့ကျမဘာပြောပြောဂရုမစိ်ုက်ဘူး ဟီးးး..ခက်တော့တာဘဲ မိန်းမရယ် ငါနားညည်းရတဲ့အထဲ ငါဘုန်းကြီးသွားဝတ်တော့မယ်....မီးမိတ်လိုက်သလို ချက်ချင်းသိပ်..ကြည့်စမ်း..ကိုယ့်ယောက်ျားအိမ်ပေါ်က ဆင်းသွားမှာ မလိုလားဘူးနော်.....ပါစပ်ဘဲပြောတာ ..ဒီလိုဆိုတော့လည်း.မအေး ငါ့ကိုချစ်သားဘဲ..။
...အမှန်တော့ ကိုယ့်ယောက်ျားရဲ့အချော့ကိုခံချင်တာ ချော့ပါများတော့လည်း စိတ်မရှည်တော့.....
လူပျိုကြီးများ မိန်းမငယ်ငယ်လေးရတော့ ဘယ်လိုချော့ရမှန်း သူမသိ....
..ဖိုးကျော်နဲ့မိအေး အင်တာနက်ထဲမှာ ချစ်သူတွေဖြစ်ကြသည် သူတို့နှစ်ယောက် ချစ်သူတွေဖြစ်ကြတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် vzo နဲ့ကြည့်ကြ အင်တာနက်မှထွက်ခါနီး အာဘွားပေးကြ ။ ဟုတ်ပ.ကျမနဲ့ကိုဖိုးကျော်vzo ကြည့်နေတဲ့အချိန် အမေနဲ့ဒေါ်လေး အနောက်ကနေ ကုပ်ခြောင်း၂ နဲ့
ရွှေသမက်ကိုချေုာင်းကြည့် သမက်လောင်း ဆိုတော့လည်း မြင်ဖူးချင်ကြတယ်လေ.။
... အိမ်ထောင်ဖက် ရွှေးတာ သမီးကို လွတ်လပ်ခွင့် ပေးထား ပါတယ်။..ကျမလည်း မငယ်တော့ဘူးလေ အသက်၃၀တောင် ရောက် လာပြီ ဒါကြောင့်မို့ မေမေတို့ သမီးကိုစိတ်ချပြီးသားပါ။)
..ကိုကျော်ကကျမကို ပြောတယ် ဒီအင်တာနက်က ငါတို့ကျေးဇူးရှင်..တဲ့။... မိအေး နှင်ရှောက်ရှောက် မပြောနဲ့ ငါတို့နှစ်ယောက် ညားတာ အင်တာနက်နဲ့ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့ အနောက်ကနေ ရွှေသမက်ကို ကုပ်ချောင်းချောင်းနဲ့ ကြည့်တာ မိအေးအမေတောင် ပါတယ်လေ....တဲ့.။ .
....ဟုတ်ပ ကျမ မမေ့သေးပါဘူး...။...
..မိအေးတစ်ယောက် မျက်ရည်သုပ်ရင်း ရှက်ပြုံးပြုံးနဲ့ ဖိုးကျော်ရဲ့ ကျောပြင်
ကို လက်သီးနဲ့ အသာအယာ ထုရင်း ခုနက ဒေါသတွေ ပြေပျောက်သွားတော့သည်။......
Posted by tailengtai တိုင်းလှိုင်တိုင်း at 7:11 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Posted by tailengtai တိုင်းလှိုင်တိုင်း at 8:47 PM2comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
....လောကကြီးတစ်ခုလုံး အမှောင်ထုကြီးစိုးပြီး တိတ်ဆိတ်နေသည်။.တစ်ချက်တစ်ချက် ကြက်တွန်သံ
ကြားရပြီး ပြန်တိတ်သွားလိုက် ပြန်ကြားလိုက်နဲ့ ပြန်ပြီးငြိမ်သက်နေသည်။.........
...."ည"တချက်တီးအချိန် ..ဟိုး..အဝေးမှာ ခွေးအူသံတွေထိတ်လန့်စရာ....."ဖာတူမာ"တယောက်....တစ်ညလုံး အိပ်မပျော် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နှစ်ချက်တီးတော့မည်။.....
......သူတို့မိသားစုထိတ်လန့်နေသည်.....အီရတ်နိုင်ငံရေးလုပ်ရှားမှု အဖွဲ့တွင် သူမ အမျိုးသား အဖွဲ့ဝင်
ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်....အခုတလော နေ့မြင်ညပျောက် ပျောက်သွားတဲ့ သူတွေလဲ မနည်းတော့။..
.."ဖာတူမာ" မှေးခနဲ တချက် အိပ်ပျော်သွားသည်..သူမနားထဲမှာ ကားသံလိုလို ကြားရသည်.ထိတ်ခနဲ လန့်နိုးလာသည် သူမ ဖြေးဖြေးချင်း ပြတင်းပေါက်ခန်းဆီးမှ မှန်လေးဟပြီး အိမ်အပြင်ဘက်ကို
....အိမ်ရှေ့တံခါးဝတွင် ကားတစ်စီး ထိုးရပ်လိုက်ပြီး အိမ်ရှေ့တည့်တည့်တွင် လင်းထိန်နေအောင်
ဆလိုက်မီး ထိုးထားတာ တွေ့လိုက်ရသည်။...အိမ်ပတ်ပတ်လည်တွင်လည်း အီရတ် စစ်သားတွေ အပြည့် ဝိုင်းထားတာ တွေ့လိုက်ရသည်။...
.....သူတို့မိသားစု ဘယ်လိုမှ ပြေးစရာလမ်း မရှိ့တော့...
..ဟေး..."အိမ်ရှင်"တခါးဖွင့်စမ်း ခင်ဗျားတို့အိမ် ငါတို့ဝိုင်းထားလိုက်ပြီ ...သေနတ်သံ တချက်နဲ့အတူ အိမ်တံခါးကို စစ်သားသုံးယောက် ခြေထောက်ဖြင့်ပြိုင်တူ ပြေးကန်လိုက်သည်။......
...တခါး ပွင့်သွားသည်။..အိမ်ထဲတွင်လည်း စစ်သားတွေအပြည့်။..ခဏအတွင်း တစ်အိမ်လုံး မီးရောင်
...တပ်မှူးတစ်ယောက် "ဖာတူမာ" အား မေးလိုက်သည်။..ခင်ဗျားယောက်ျား ဘယ်မှာလဲ?..မရှိဘူး
ဗိုလ်ကြီး မနေ့ကဓါတ်ဆီဆိုင်သွားတာ ပြန်မလာဘူး ခင်ဗျားမလိမ်နဲ့နော် ဆိုင်ကိုကျနော် ရောက်ခဲ့ပြီးပြီ ဆီဆိုင်ရဲ့ အနောက်ဘက်ခြမ်း စတိုးဆိုင်ထဲ မကျန်ရှာပြီးပြီ မတွေ့ဘူး။......
.."ဖာတူမာ"အား ဘယ်ပြန်ညာပြန် ပါးသုံးချက် အရိုက်ခံရလို့ ပါးစပ်မှသွေးတွေ စီးကျလာသည်။...
..စစ်သားတွေအခန်းထဲအနှံ့ ဝင်ပြီးရှာလည်းမတွေ့....တပ်မှူး ဒေါသထွက်လာသည်
...ဟေ့...."ဖာတူမာ"..ဒီဂိုဒေါင် သော့ဖွင့်စမ်း .သူမ တခါးသော့ ဖွင့်ပေးလိုက်သည်။.တပ်မှူးက ဝင်ရှာဖို့ အမိန့်ပေးလိုက်ပြီး တပ်သားတွေ ဂိုဒေါင်တစ်ခုလုံးရှာလည်းမတွေ့ ...မတွေ့ဘူးဗိုလ်ကြီး။....
..တပ်မှူးနှင့် စစ်သား သုံးယောက်..ဝင်ပြီး ပြန်လိုက်ရှာသည်။...မတွေ့...….ဒေါင့် တစ်နေရာတွင် မသင်္ကာလို့ သွားကြည့်လည်းမတွေ့ ပြန်အလှည့်တွင် တပ်မှူးရဲ့ခြေထောက် ခင်းထားသောကော်ဇော
အဟောင်းပေါ်သို့တက်နှင်းမိလိုက်တော့ "ကောင်း..က..လောင်း"...အသံတစ်ချက် မြည်သွားသည်။.
ရဲဘော် ဒီကော်ဇော လှန်လိုက်စမ်း.....စစ်သား နှစ်ယောက်ကော်ဇောလှန်လိုက်သည့်... အခိုက်တွင် သံပြားအထူ အဖုံးတစ်ခုကို တွေလိုက်ရသည်။
..တပ်မှူးက အဖုံးဖွင့်ဖို့ စစ်သားသုံးယောက်အား အမိန့်ပေးလိုက်သည်။..."ဖာတူမာ"တယောက်... ဟီးဟီး.ဟီး..ဗိုလ်ကြီးရယ် ကျွန်မယောက်ျားကို မဖမ်းပါနဲ့ ဗိုဟ်ကြီးနော် ကျမမှာလူမမယ် ကလေးတွေနဲ့ မဖမ်းပါနဲ့ နော်....ဗိုဟ်ကြီးနော်..ဟီး..ဟီးဟီး ..
..စစ်သား တစ်ယောက်ပြေးပြီး..."သူမ"အား အနောက်ကနေခြေထောက်ဖြင့် ဆောင်ကန်လိုက်သည်။.
...တပ်မှူးရဲ့ ရိုက်ချက်နဲ့အတူ .."ဖာတူမာ" တယောက် .....မေ့မျော သွားတော့သည်။...
..မညာမတာ အကြင်နာမဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ် ဆိုးတွမ်းတာ စစ်အာဏာရှင်တွေလုပ်ရပ်.
(အာဏာတည်မြဲဖို့ ရာထူးတက်ဖို့ အထက်အမိန့် အတိုင်း လုပ်ပြရမယ်မဟုတ်လား..ပိုတာပိုရမည် လိုတာမရှိ့ ..ရစ်စက်ပါပေ့ တပ်မှူးရယ်.....
x..ဝေရီမှုန်ဝါး မိုးမလင်းတလင်းအချိန်"သူမ"သတိရလာသည် သူ့မရဲ့ အမျိုးသားကိုတော့ ဖမ်းသွားပြီး သတ်ပစ်လိုက်ကြပြီလေ......
......အိမ်ပေါ် ပြေးတက်ပြီး ...တစ်နှစ်သမီးကို ကျောမှာပိုး ...လေးနှစ်သမီးကို လက်မှာဆွဲ ရှိ့သမျှ
ရွှေတိုငွေစလေး ယူပြီး ကူဝိတ် နိုင်ငံ နယ်စပ်တစ်နေရာသို့ သားအမိ သုံးယောက်ထွက်လာခဲ့သည်။......
.......သတင်းအစအန ဘာတစ်ခုမှမကြားရတော့.....ဒီလိုနဲ့ နှစ်တွေကြာခဲ့ပြီ..... သူမမိသားစု့ အမေရိကသို့ ပြောင်းရွှေ့လာခဲသည်။...
..ကိုစိုင်း နဲ့ ဖာတူမာ နှစ်ယောက် "LTK see ford"စားသောက်ဆိုင်တွင် ညဆိုင်းအလုပ် အတူ
လုပ်ကြသည်။.....ည 12:00နာရီ စားသောက်သူတွေ ပြန်ကုန်ကြပြီး စားပွဲထိုးနဲ့ကြော်ဆရာတွေလဲ
ပြန်ကုန်ကြပြီ ကိုစိုင်းနဲ့ ဖာတူမာ သူတို့နှစ်ယောက်သာ ကျန်တော့တဲ့အတွက် တစ်ဆိုင်လုံး တိတ်ဆိတ်
.. မနက်ဖန် ဆိုင်ဖွင့်ဖို့အတွက် အသီးအရွက်နဲ့ ပင်လယ်စာတွေပြင်ဆင်ရသည်။"ည"က နက် တထက်
နက်လာသည်.....၃ချက်တီးတောမည်။..ဖာတူမာ"တစ်ယောက် အလာအရှင်မြတ်ဆီ ဆုတွေတောင်း
..အိုး...အဖဘုရားသခင် အကျွန်မလို ကွဲကွာနေသောမိသားစု..ကမ္ဘာ အရပ်ရပ်မှာရှိ့သော အကြောင်း
အမျိုးမျိုးကြောင့် ခွဲခွာကွဲကွာနေသော မိသားစုများနဲ့ မိမိယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းချခံနေရသော မိသားစုများ အားလုံး အမြန်ဆုံး ပြန်လည် ဆုံဆည်းခွင့် ပေးပါ......အဖဘုရားသခင်........
.........ညတိုင်း.... "သူမ"ဆုတောင်းနေကျ....ဆွေးဆွေး..မြေ့မြေ့..ကြေကြေ..ကွဲကွဲ..ညည်းညူသော အလွမ်းသီချင်းနဲ့ အတူရှိုက်ကြီးတငင်....."ဖာတူမာ"ရဲ့ ငိုချလိုက်သော အသံ....ကိုစိုင်း ဒေါင့်တစ်နေရာမှ ကြားလိုက်ရသည်။...
....ဒီသီချင်း "သူမ"ဖွင့်နေကျ..... ဒီသီချင်းဖွင့်တိုင်း ကိုစိုင်းသိပ်မကြိုက် ...ဒီ..သီချင်းသံကြားရတိုင်း ကြက်သီးမွေးညင်းတွေထပြီး.. သူတို့အနား မကောင်းဆိုးဝါးများရောက်လာသလို ခံစားရသည်။..
...xxxxxx.."ကိုစိုင်း" သူမအနား တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်း လျှောက်လာသည်....သူမ မျက်ဝန်းမှလည်း မျက်ရည်တွေ ကိုစိုင်း သူမအနားရောက်သည်နှင့် ကိုစိုင်းရဲ့ရင်ခွင်ထဲပြေးဝင်လာပြီး သူမခန္ဓာကိုယ်
တစ်ခုလုံး အပ်ထားလိုက်သည် ။..
......ကိုစိုင်းရဲ့ ရင်ခွင်တစ်ခုလုံး မျက်ရည်တွေ ရွှဲနေပြီလေ...ကိုစိုင်းတစ်ယောက် သူမ မျက်ဝန်းမှ မျက်ရည်တွေ ပုဝါဖြင့် ယုယစွာ သုတ်ပေးရင်း ..နှစ်ယောက်သား တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် တင်းကြပ်စွာ ဖက်ထားလိုက်သည်။ သူမမျက်ဝန်းမှ မျက်ရည်တွေမကျတောပေမဲ့ ရှိုက်သံတိုးတိုးလေး ကြားနေရသည်။
...သူမရဲ့ နားထဲမှာလည်း ကိုစိုင်းရဲ့ရင်ခုန်သံ တဒုန်းဒုန်းနဲ့ ကြားနေရသည်။..
.... ညီမ...ဒီနေ့ကစပြီးညီမကို..."ဆု"လို့ခေါ်မယ်နော်..သူမ ညင်သာစွာခေါင်းငြိမ့် လိုက်သည်....
"ကိုစိုင်း" တိုးတိုးလေးခေါ်လိုက်သည် ..."ဆု"...အင်း..ပြောလေစိုင်း... မငိုနဲ့တော့နော် ဆု....အလွမ်းသီချင်းတွေလည်း မဖွင့်နဲ့တော့နော်.. "ဆု"အနားမှာ စိုင်းရှိနေပြီလေ.. တကယ်လားဟင်?...
...တကယ်ပါ.. "ဆု"..ရဲ့ရင်ထဲ "စိုင်း"ထာဝရ ရှိနေမှာပါ။...
..အလုပ်ပြီးသည်နှင့် နှစ်ယောက်အတူ ဆိုင်ထဲမှ ထွက်လာပြီး အိမ်ပြန်ဖို့ ကားရှိရာ လမ်းလျှောက်
ဦးတည်လျှက် သူတို့ကားဆီမရောက်ခင် လေပြေလေညှင်း နဲ့ အတူ မိုးပြေးလေးတွေ ခပ်ကျဲကျဲ ရွာနေသည်။
..လက်တွဲပြီး လမ်းလျှောက် နေသောသူတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာ..အချစ်ကြံမ္မာမိုးစက်လေးတွေ အေးစက်နေသည်။....
..သူတို့နှစ်ယောက် ချစ်သူတွေဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်လောက်အကြာမှာ မမျှော်လင့်ဘဲ တယောက်တနေရာဆီ ဝေးသွားကြသည်။.......
.....စိုနေတဲ့ ရင်ခွင်ထဲက မျက်ရည်လည်း... မခြောက်သေးပါ။..
.. . ....သူမရဲ့ ရှိုက်သံလေးလည်း...ကြားနေဆဲပါ။..........
. .....နွေနံနက်ခင်းရဲ့ မိုးစက်တွေလည်း...အေးနေဆဲပါ။....
(စိုင်းထွန်း boston) မိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံကြပါစေ
Posted by tailengtai တိုင်းလှိုင်တိုင်း at 11:04 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
.......ကြာခဲ့သော်လည်း မှတ်မိသေးသည် ကျနော်ငယ်ငယ်က မသွားစဖူး ကချင်ပြည်နယ်မှ ခရီးရက်ရှည် ထွက်စအချိန်ပေါ့.........မြစ်ကြီးနားက ရထားစထွက်တော့ မမြန်မနှေး တဖြေးဖြေးနဲ့ ခုတ်မောင်းနေတဲ့ ရထား.. ဘယ်ညာ ဘေးနှစ်ဖက်မှာတော့ ရွှေဝါရောင်စပါးခင်းတွေ...... ရထားဖြတ်သွားတဲ့အချိန် စပါးရိတ်တဲ့ တောင်သူတွေ ခဏ ခါးအညှောင်းဆန့်ရင်ပေါ့..ကျနော်တို့ စီးလာတဲ့ ရထားကို လက်တွေဝှေ့ ရမ်းပြကြ
ခမောက်တွေ ချွတ်ပြီးရမ်း ပြကြ ချစ်စရာ စပါးရိတ်သိမ်းတဲ့ တောင်သူတွေ လယ်ကွင်းရဲ့ ဟိုး..အဝေးတဖက်မှာတော့ စိမ်းလန်းတဲ့မျက်ခင်းတွေ စိမ်းစိုအုံ့ဆိုင်းတဲ့ သစ်ပင်တွေ သဘာဝ ရောင်စုံတောရိုင်း ပန်းအလှတွေ ဟိုး....တဖက်အဝေးမှာတော့ မြူတွေဆိုင်းပြီး မိုင်းပြပြနဲ့ လှိုင်းထနေတဲ့ အပြာရောင် တောင်တန်းကြီးတွေ......
..........မော်လူး ပင်ဝယ် အင်းတော်လေး ဒီဘက်ရောက်လာတဲ့ အချိန် ကျနော်တို့ စီးလာတဲ့ရထား တခါမှမစီးဖူးတဲ့အမြန်နှုန်းနဲ့ ပိုပြီးမြန်လာတယ် ရင်ထဲမှာလည်း တသိမ့်သိမ့်နဲ့ ရထားဘေးနှစ်ဖက်ကအပင်တွေလည်း တရိပ်ရိပ်.. ပြာရီမှောင်မိုင်းနေတဲ့ မဲစာတောင်ခြေ
ကြည်နူးစရာ "ကဒူးကနန်း"တို့ ဌာနေ ဒီရေဒီမြေ ဒီအလှအပ ကျော်လာတဲ့အချိန်...
....ဗမာပြည်..ရွှေဘို ရေမြေ သဘာဝ အရောင် အသွေးနဲ့ အပူချိန်တွေလည်း ပြောင်းလို့ ...ရိုးတံကျဲကျဲ သစ်ပင်တွေ မိုးခေါင်ရေရှား သေဒမို့ ဆူးပင်တွေ ရွက်ကျပင်ပေါက်တွေ ကုတ္ကို ကုက္ကား ထနှောင်း ကျနော်မခေါ်တတ်တဲ့ မြက်ပင်တွေ ....နေဝင်တော့မယ့် ညနေဆည်းဆာ..... ...ကျနော်တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးတဲ့ အလှလှအပမျိုး ...အသားညိုညို သနပ်ခါးပါးကျားကွက် ရေအိုးတွေ ခေါင်းပေါ်ရွက်ပြီး ရေခပ်ဆင်းလာတဲ့ ...
ပျိုမေ ညိုချေားလေးတွေ ထန်းပင်ပေါ်က ထန်းတက်နေတဲ့ ထန်းတက်သမားတွေ အမြုတ်တစီစီနဲ့ ထန်းရေခါး အေးအေး လေးတွေ.....
...(ကချင်ပြည်နယ် သျှမ်းတို့ဒေသ မှာတော့ ခေါင်ရည် ချိုချို ခါးခါး တွေ အလွန်လှပတဲ့ သဘာဝ တောတောင် စိမ့်စမ်း ရေတခွန် လှပပြီးကြီးမားတဲ့ သမိုင်းဝင် ရွှေမဇ္ဇူဘုရားနဲ့ အင်းတော်ကြီးအင်းတွေ ..... အင့်...သက်ပြင်းချရင်း ပြန်စဉ်းစားလိုက်တိုင်း အလွမ်းလှိုင်းတွေက ရင်ထဲမှာ ပြန်ခွင့်ကြုံတဲ့ တနေ့ အမေရယ်.. သားပြန်လာခဲ့မယ်နော်.....
ဒုတိယ အကြိမ် ထွက်လာခဲ့တာ ပထမအကြိမ်လို အပျော်ခရီး ကြည်နူးစ၇ာ မဟုတ်တော့ သဲထိပ်ရင်ဖို အကြောက်တရားတွေနဲ့ နေစရာ ပုန်းစရာ မရှိတော့ပြီ.... ညသန်းခေါင်ယံ လူခြေသိပ် အိပ်မောကျ နေတဲ့အချိန် မှတ်ပုံတင် ကပ်ခွာလုပ် ဓါတ်ပုံ ကပ်ပြီး... ဟိုး....အဝေး........နယ်စပ် တစ်နေရာဆီ ခရီးကြမ်းနှင်ခဲ့ရတယ်အမေ ...
...အခု သားနေတဲ့နေရာမှာတော့ အမေရယ် ရိုးတံကျဲကျဲ ခြင်းတူပေမဲ့ ရာသီခြင်းတော့မတူဘူးအမေရယ်....(မြန်မာပြည်မှာတော့ ရိုးတံကျဲကျဲ ဆိုရင် နွေဦးလေရူးတိုက်တဲ့ အချိန်လေ) ..အခုဒီမှာ သားနေတဲ့မြို့ ရိုးတံကျဲကျဲ မိုးဖွဲဖွဲမှာ ခိုက်ခိုက်တုန်အောင် လေအေးအေးနဲ့ ရင်ထဲ သဲထဲထိ့ နားရွက်ပြတ်ကျ မတတ်အောင်.... စိမ့်စိမ့် အေးပြီး.. ဟေမာန်ဆောင်းက ကြိုဆိုနေပြီ..အမေ.......
...သူ့...မျက်ဝန်းမှ မျက်ရည်ပူတွေ လိမ့်ကျလာသည်..ဝဲကျလာတဲ့မျက်ရည်သည်။.. အလွမ်းမျက်ရည်လား?... စမ်းရေလိုအေးတဲ့ အမေ့ရဲ့ မေတ္တာ....သားပြန်လာရင် အနှိုင်းဆမဲ့ အပျော်လုံးတွေဆို့ပြီး အနိုင်းဆမဲ့ အမေရဲ့ရင်ထဲက အပြုံးတွေနဲ့ ရွာဦးမှာ သားကိုလာကြိုမဲ့ အမေ...သားပြန်ခွင့်ရတဲ့တနေ့ .."အမေ"မရှိတော့မှာ...သားစိုးရိမ်တယ်...အမေ....
Posted by tailengtai တိုင်းလှိုင်တိုင်း at 10:24 AM 1 comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest